Somaliland.Org » Sidee baa u haboon ee umad shucuurteeda farxada u muujisaa, maxaase inaga reeban Somaliland.Org
OPINIONSidee baa u haboon ee umad shucuurteeda farxada u muujisaa, maxaase inaga reeban
May 29th, 2008 Comments Off Dhab ahaantii waxaan aad ugu faraxsanahay sida qiimaha badan ee umadeenu ay u muujiyeen shacuurtooda wadaninimo iyo abaabulka ay ka galeen maleenta soo celinta xoriyada umada reer Somaliland ee 18may. sidaad la socotaan umada reer Somaliland waxay ka dabaal degeen dhamaan cirifyada dunida sida USA, CANADA, DHAMAAN SOMALILAND CAASUMADAHEEDA, UK.INDIA iyo meelo badan, waana wax ay yeelaan dhamaan qowmiyadaha aduunka ku nool, si kastaba ha ahaatee waxaynu nahay umad dhaqan, asal iyo diin facweyn leh kana tarjumaysa dhaqankaa kaasoo uu jiilba jiilka ka danbeeya usii gudbinayo. walaalayaal waxaan ka jawaabi kari waayey markaan ka arkay shaashada xafladii Caneda ka dhacday su,aal ay inan yar oo aan dhalay i weydiisay oo 9jir
(Waxay tidhi aabo calankeena waxaa ku yaal tawxiidka islaamka dadka oo dhan waa huwan yahay, hadana wey daansayaan, ama cayaarayaan, miyaaney qalad ahayn?)
Aqristaw bal u jawaab inantaa yar, waxaa taa dheer waxaa ku dhex jira dad ajaanib ah oo ay ahayd in ay wanaaga islaamka u gudbiyaan, waxaaba taaba i qarso tidhi xitaa madaxtooyadii S/land baa taa mid aan ka duwaneyn ka dhacaysaa iyada oo SH. Maxamed yaasiin uu marqaati ka yahay iyo odayaashi inoogu dad waaweynaa ee laga dhowrayey in aybulshadooda dhaqan wanaag u horseedaan.
Si kastaba ha ahaatee waxaa is weydiin mudan maxaynu ubadkeena dhaxalsiinaynaa? maxaa inoo diiday macaanka diinteena, ee inoo suurto gelisay in aynu ku noolaano xayo, sharaf, iyo wanaag. Waxaan maalin fadhiyay maxkamad ka dhacday wadan aan Somali ahayn oo ay 3 Aabe ay ku murmayaan ilmo yar oo ay leeyihiin anaa dhalay iyo anaa dhalay, waxaa la weydiiyey hooyadii in ay furto marqaatiga, waxay tidhi waar anigu 3 ninba waan arkaye dee DNA halagu kala saaro kii aabaha ah, dhabtii arinkaas waxa uu